FANAFIHANA BANKY : Sarona niaraka tamin’ny fitaovam-piadiana sy fanafody gasy ilay jiolahy
Tsy misy tahotra intsony ireo olon-dratsy amin’ny fanafihana banky eto amintsika ary tsikaritra mihitsy aza fa efa arifomba avokoa ny fitaovana ampiasain’izy ireo mandritra ny fandrobana raha ny tranga niseho tato ho ato. 18 octobre 2019
Raha ny angom-baovao voaray teo aloha teo, vao tsy ela akory fa tamin’ity taona ity ihany no nisy nandroba ny volabe tao amin’ny ivon-toerana fampindramam-bola eny amin’ny Kaominina Mahitsy Distrikan’ Ambohidratrimo, ka tafatsoaka ny sakaizan’ilay tovovavy mpiasa tao izay voalaza fa tompon’antoka nahavanona izany halatra vola an-tapitrisany izany.
Araka ny loharanom-baovao voaray avy amin’ny Zandarimariam-pirenena indray izao dia fantatra fa tany amin’ny Ivon-toerana fampindramam-bola tao Soanierana Distrikan’i Taolagnaro Faritra Anosy ny alarobia hariva, 16 oktobra lasa teo. Jiolahy miisa roa mitam-piadiana no nikasa handrava ny vola be tao saingy tsy nahazo na ariary izy ireo raha toa ka mafy hidy sy tsy voasokatra ilay vatabe fitoeram-bola (coffre). Noezahin’ireto farany novahaina ary naharitra ora maro izy ireo nanatanteraka izany fa toa nandamoka ihany .
Raha vao nandre io tranga io ny « Equipe d’Intervention Rapide » tao amin’ny Vondron-tobim-pileovan’ny Zandarimaria Anosy dia nanao fitsirihana ireo olon-dratsy nitsoaka , narahan-dia izy ireo tamin’izay fotoana izay ka tra-tehaka ny iraikalahy. Sarona niaraka taminy ny basy poleta iray vita tefy gasy, sy bala “ calibre” 12, etsy andanin’izay dia mbola nahitana fanafody gasy marobe toy ny moara teny am-bozonan’io jiolahy io. Ny namany iray hafa niaraka nandroba taminy mbola tafatsoaka tany anaty reniranon’Ambinanibe raha nanararaotra ny andro maizina ka tsy hita popoka ny nanjavonany ary mbola karohina fatratra hatramin’izao. Ity voasambotra kosa mbola atao famotorana lalina hatreto. Nisaotra ny fokonolona moa ireo Zandary tamin’ny fanomezam-baovao ara-potoana ary koa tamin’ny fanampiana nandritra ny fikarohana ireo jiolahy.
Nangonin’i Tatianà R. sy Mpanjono
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (167) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (94) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (91) 22 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (83) 26 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (80) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (72) 22 mai 2020